Izinhlobo zemisebe: zakhiwa kanjani nezimpawu | Isimo Sezulu Senethiwekhi
Abantu bebelokhu behehwa yimisebe. Ukukhishwa okunamandla kwamandla kagesi emvelo. Imvamisa kwenzeka ngesikhathi sesiphepho esidala ukushaya ngamandla kagesi. Lokhu kukhishwa kombani kuhambisana nokuphuma kombani okwaziwa ngegama lombani nomsindo owaziwa ngegama lokuduma kwezulu. Noma kunjalo, kuningi izinhlobo zemisebe kuya ngemvelaphi nokwakheka abanakho.
Kulesi sihloko sizokutshela ukuthi yiziphi izinhlobo zemisebe ehlukahlukene nokuthi yakhiwa kanjani.
2 Ukwakheka kwezinhlobo zombani
3 Izinhlobo zemisebe
Ukukhishwa kukagesi okusuka emibani kuhambisana nokuphuma kwesibani. Lokhu kuphuma kokukhanya kwaziwa njengombani futhi kubangelwa ukudlula kwamandla kagesi ahlukanisa ama-molecule omoya. Ngemuva kwalokho, kwezwakala umsindo owaziwa ngegama lokuduma kwezulu futhi kuthuthukiswa igagasi lokushaqeka. Ugesi okhiqizwayo udlula emkhathini, ushise umoya ngokushesha futhi uveza umsindo womhlaba. Imisebe isesimweni seplasmatic.
Ubude bomswakama bucishe bube ngamamitha ayi-1500. Njengokulangazelela, ngo-2007, umbani omude kakhulu orekhodiwe wawuse-Oklahoma futhi wafinyelela kumakhilomitha angama-321 ubude. Umbani uvame ukuhamba ngejubane elijwayelekile elingamakhilomitha angama-440 ngomzuzwana futhi ungafinyelela isivinini esifinyelela kumakhilomitha ayi-1400 16 ngomzuzwana. Umehluko ongaba khona ama-volts wami ayisigidi maqondana nomhlaba. Ngakho-ke, le misebe inengozi enkulu. Zibalelwa ku-XNUMX million iziphepho zombani ezirekhodwa emhlabeni wonke unyaka ngamunye.
Into ejwayelekile kunazo zonke ukuthi ezinhlotsheni ezahlukahlukene zemisebe zikhiqizwa yizinhlayiya ezinhle emhlabathini nezinhlayiya ezingezinhle emafwini. Lokhu kungenxa yokuthuthuka okuqondile kwamafu abizwa nge-cumulonimbus. Lapho i-cumulonimbus ifinyelela ku-tropopause (indawo yokugcina ye-troposphere), izindleko ezinhle ifu elinazo ezibhekene nokuheha amacala amabi. Lokhu kuhamba kwamashaji ngomkhathi yilokho okwakha imisebe. Imvamisa yakha umthelela emuva naphambili. Kusho izinhlayiya ezikhuphuka khona manjalo bese zibuyela emuva zidala umbono wokuthi imisebe iyehla.
Umbani ungakhiqiza amandla esikhashana ama-watts ayisigidi, angaqhathaniswa nawokuqhuma kwenuzi. Isiyalo esingaphakathi kwesimo sezulu esibhekele ukutadisha umbani nakho konke okuhlobene nakho kubizwa nge-cerraunology.
Ukwakheka kwezinhlobo zombani
Ukuthi ukuqhuma kukagesi kuqala kanjani kuseyimpikiswano. Ososayensi abakaze bakwazi ukuthola ukuthi ziyini izimbangela zalokhu. Abaziwa kakhulu yilabo abathi ukuphazamiseka emkhathini kuyimbangela yemvelaphi yezinhlobo zombani. Lokhu kuphazamiseka emkhathini Kungenxa yokushintsha kwemimoya, umswakama nengcindezi yasemkhathini. Kuxoxwa ngemiphumela yomoya welanga nokuqongelelwa kwezinhlayiya zelanga ezishajiwe.
I-Ice kucatshangwa ukuthi iyinto esemqoka entuthukweni. Futhi kungenxa yokuthi inesibopho sokukhuthaza ukwahlukana phakathi kwamacala avumayo namabi ngaphakathi kwefu le-cumulonimbus. Umbani ungaba khona futhi emafwini omlotha aqhuma ezintabamlilo, noma kungaba futhi yimiphumela yomlilo wehlathi onamandla odala uthuli olukwazi ukudala isimangalo.
Emcabangweni wokungeniswa kwe-electrostatic sinezinkokhelo eziqhutshwa ngezinqubo ezingakaqiniseki ngabantu. Ukwehlukaniswa kwamashaji kudinga umsinga womoya onamandla obheke phezulu obhekele ukuthwala amaconsi amanzi aye phezulu. Ngale ndlela, lapho amaconsi amanzi efinyelela ezindaweni eziphakeme lapho kwenzeka khona umoya ozungezile obandayo, ukupholisa okusheshayo kwenzeka. Imvamisa lawa mazinga afakwa ama-supercooled emazingeni okushisa angama -10 no -20 degrees. Ukushayisana kwamakristalu eqhwa kwakha inhlanganisela yamanzi neqhwa okuthiwa isichotho. Ukushayisana okwenzekayo kubangela ukuthi inkokhiso enhle ithi idluliselwe kumakristalu e-ice bese kuthi ukukhokhiswa okungalungile kube kuncane.
Imisinga ihambisa amakristalu eqhwa alula phezulu futhi ibangele ukuthi kube nezindleko ezinhle zokwakha ngemuva kwefu. Ekugcineni, isenzo samandla adonsela phansi eMhlabeni yiso esenza ukuthi isichotho siwele ngamacala amabi njengoba sisinda enkabeni nasezingxenyeni eziphansi kakhulu zefu. Ukwehlukaniswa kwamanani nokuqoqwa kuyaqhubeka kuze kube yilapho amandla kagesi esenele ukuqala ukukhishwa kukagesi.
Enye i-hypothesis ekhona mayelana nendlela ye-polarization inezinto ezimbili. Ake sibone ukuthi ziyini:
Ukuwa kweqhwa namaconsi amanzi kuyahlukaniswa ngogesi ngesikhathi lapho bewela khona emkhakheni kagesi wemvelo womhlaba.
Ukuwa kwezinhlayiya zeqhwa lokho zishayisana futhi zikhokhise ngokungeniswa kwe-electrostatic.
Njengoba sishilo ngaphambili, kunezinhlobo ezahlukahlukene zemisebe enezici ezithile. Umbani ovame kakhulu umbani yiwona obhekwe kakhulu futhi waziwa njenge-streak ray. Le yingxenye ebonakalayo yomkhondo we-ray. Eziningi zazo zenzeka ngaphakathi kwefu ukuze zingabonakali. Ake sibone ukuthi yiziphi izinhlobo eziyinhloko zemisebe:
Umbani we-Cloud-to-ground: iyona eyaziwa kakhulu futhi eyesibili evame kakhulu. Imele usongo olukhulu empilweni nasempahla. Iyakwazi ukuthinta umhlaba futhi ikhiphe phakathi kwefu le-cumulonimbus nomhlaba.
Pearl ray: luhlobo lombani wefu-to-ground obonakala uqhekeka ube uchungechunge lwezigaba ezimfishane, ezikhanyayo.
Umbani wesiteki: Olunye uhlobo lombani wefu kuya phansi futhi unesikhathi esifushane esibonakala njengokukhanya kuphela. Imvamisa iyakhanya kakhulu futhi inamamaki amaningi.
Ifu ukufiphaza umbani: kwenzeka phakathi kwezindawo ezingaxhumani nomhlabathi. Imvamisa kwenzeka lapho amafu amabili ahlukene enza umehluko kumandla kagesi.
Ngiyethemba ukuthi ngalolu lwazi ungafunda kabanzi ngezinhlobo ezahlukahlukene zemisebe nezici zayo.
Indlela ephelele ye-athikili: Isimo Sezulu Senethiwekhi » Izimo zezulu » Izinhlobo zemisebe